Ciidanka amaanka Galmudug oo gacanta ku dhigay hub loo waday maleeshiyaadka Ahlusunna. - XAL DOON
Home NEWS Ciidanka amaanka Galmudug oo gacanta ku dhigay hub loo waday maleeshiyaadka Ahlusunna.
Ciidanka amaanka Galmudug oo gacanta ku dhigay hub loo waday maleeshiyaadka Ahlusunna.
Sida uu Xaldoon Media u sheegay Gaashaanle Maxamed Cabdi Cabdulle oo ku sugan deegaanka Galinsoor ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen gaari nuuciisa lagu sheegay “Niic” oo siday rasaas farabadan iyo gantaaladda garabka laga tuuro.
Sarkaalka u waramay Xaldoon ayaa intaasi ku daray in hubka uu isku jiro rasaasta nuucyada kala duwan iyo qoryahay Dhashiikaha, sabanka garabka laga tuuro, qoriga Soomaalidu u taqaano dabajeex iyo qoryo kale cusub oo hada baaritaan lagu wado halka laga soo dhiibay.